दुर्घटनापछि त्रिशाला भन्छिन्- अब हेलमेट किन्छु !
भर्खरै डाक्टर बनेकी गायिका त्रिशाला गुरुङलाई ९ बजे अस्पताल पुग्नुपर्छ । सँधैझैं ८: ४५ मा उनले राइड सेयरिङ एप पठाओ प्रयोग गरेर पठाओ बाइक डाकिन् ।चाबहिलको घरमै उनलाई लिन एकैछिनमा पठाओ राइडर आइपुगे।
त्रिशालाले हत्त न पत्त ठोकिएको निधार छामिन्। भूईंमा ददारिएर औंलाहरु दुखि’रहेका थिए। उनी आत्तिइन्-कतै मासु पो निस्कियो कि? त्यसपछि भक्का’निन थालिन्। ‘निधार त सुनिएर ठूलो टुटुल्को भाको थियो। माथि अलिकति काटेको थियो। रगत पनि बग्न थाल्यो। त्यसपछि अस्पताल जान्छु भन्दै म रुन थालें,’ उनी सम्झिन्छिन्। राइडर डराइसकेका थिए। ए।
इमरजेन्सीमा सबैले ढाडस दिएपछि बल्ल रुन छोडिन्। उनको मनमा निधारमा ठूलै चोट लाग्यो कि भन्ने डर थियो। साथीले निधारको फोटो खिचेर देखाएपछि भने उनले लामो सास फेरिन्। ‘नयाँ भिडियो सुट गर्नु थियो। अनुहार बिग्रि’यो कि भनेर कत्ति डर लाग्यो। हातखुट्टा भाँ’चिए पनि हुन्थ्यो तर मुखै बिग्रियो, टाँका लगाउनु पर्‍यो भने भिडियो कसरी बनाउने भनेर चिन्तित थिएँ।
उपचार सकेपछि फेसबुकमा भएका फलोअरलाई हेलमेटको आवश्यकताबारे बोलेर स्टोरी पनि राखिन्। स्टोरी राख्न साथ पठाओबाट उनलाई फोन आयो। राइडरलाई मोबाइल होल्डर, हेलमेट दिए पनि लापरबाही गरेर त्यो नबोकेको उनीहरुले स्वीकारे। माफी पनि मागे। १ महिनाको लागि पठाओमा प्रोमो कोड(सहुलियत) दिने बताएका थिए। तर त्रिशालालाई त्यसले लोभ्याएन।
‘बाइकमा हिँड्दा हेलमेट कति आवश्यक छ भन्ने मलाई थाहा भयो,’ उनले दुर्घट*नाले सिकाएको पाठ बताइन्। ‘टाउको फुटेर म मर्न पनि सक्थें। मलाई हेलमेट अति आवश्यक लाग्यो। अब म हेलमेट किन्छु,’ उनले भनिन्।
राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओले अहिलेसम्म यात्रु सुरक्षाका लागि कुनै बीमा सुविधा राखेकै छैन। त्यसैले यात्रु दु’र्घट्ना भइहाले, पठाओले कुनै खर्चको भार उठाउँदैन। अब भने यात्रु बीमाका लागि बीमा कम्पनीसँग कुरा भइरहेको पठाओमा मार्केटिङ हेरिरहेकी सुर्खिया हमाल बताउँछिन्। ‘इन्सयुरेन्स कम्पनीसँग कुरा भइरहेको छ। यस्तोखालको पोलिसी छैन रहेछ कम्पनीसँग पनि,’ उनले फोन सम्पर्कमा भनिन्।